1325 milina fanoratana hazo
1530 milina fanapahana plasma
2060 Fibre Laser Cutting Machine
4515 Fibre Laser Cutting Machine
Fibre marika milina
Ny fampiharana ny milina sokitra tamin'ny laser amin'ny indostria dia lavitra lavitra noho ny noeritreretintsika?
Ny asa tanana sokitra tamin'ny laser dia manondro ny fampiasana angovo avo lenta amin'ny taratra tamin'ny laser natokana ho eny ambonin'ny fitaovana, mba hiova ara-batana sy ara-tsimika ny ambonin'ny fitaovana, mba hahazoana endrika hita maso amin'ny asa tanana sokitra. 1 tamin'ny laser sokitra asa tanana araka ny m...
Ny milina fanapahana laser be mpampiasa indrindra! Mahazo fahatokisana sy fiaraha-miasa maharitra ny mpanjifa!
Co2 tamin'ny laser milina no be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao tsena sy ny varotra indostrian'ny karazana fitaovana, SYa CNC fitaovana teknolojia nanaraka akaiky ny lohalaharana ny famokarana ny fanapahana fitaovana ho an'ny indostria famokarana - CO2 tamin'ny laser fanapahana milina, fanapahana ny sakany amin'ny 600 * 400 -200...
SYa CNC laser cutting machine, Nahoana no mitazona varotra avo lenta?
SYa-1390 Co2 tamin'ny laser fanapahana milina Ity milina ity dia ara-toekarena CO2 tamin'ny laser fanapahana milina, fitaovana amin'ny milina manokana fonony fiarovana, tsy mba hiantohana ny fiarovana manokana ny mpandraharaha, ary manao ny famokarana manontolo fanodinana bebe kokoa ny fiarovana ny tontolo iainana, ankoatra ny fiarovana Cove. ...
Heverinao ve fa afaka manolo tsikelikely ny milina fanapahana tamin'ny laser fibre CO2???
Ny fampiharana ny teknolojia tamin'ny laser tamin'ny milina dia efa ela, tamin'ny laser teknolojia misy fiantraikany eo amin'ny indostria fanodinana, ny fampandrosoana ny teknolojia sy ny fanoloana ny taloha sy ny teknolojia vaovao ho matotra tsikelikely Optical fibre fitaovana, ary ankehitriny dia fantatra ho tena zava-dehibe tamin'ny laser fanodinana. ..
SYa CNC milina sokitra, nihevitra aho fa ho liana ianao!
SYa CNC milina sokitra teknôlôjia，Ao amin'ny fitaovana milina fanaraha-maso nomerika, ny spindle elektrika matetika dia mampiasa fomba fanaraha-maso ny hafainganam-pandehan'ny fiovam-po. Misy fomba fanaraha-maso telo lehibe: fiara fiovam-po sy fanaraha-maso matetika, fiara sy fanaraha-maso vector ary fanaraha-maso mivantana. ...
Fantatrao ve fa mila fikojakojana ny milina fibre optika mandritra ny fampiasana azy?
Fibre tamin'ny laser fanapahana milina no be mpampiasa amin'ny orinasa Ampiasaina amin'ny takelaka vy fanodinana, fiaramanidina, aerospace, elektronika, fitaovana elektrika, fantsona fittings, fiara, sakafo milina, lamba milina, injeniera milina, mazava tsara faritra, sambo, metallurgy fitaovana, ascenseur, househo ...
Iza amin'ireo rafitra milina fanaovana sokitra no ampiasainao matetika?
Ny rafitra milina sokitra dia mizara ho sokajy telo Shandong Shenya CNC equipment Co., Ltd. dia mifototra amin'ny filan'ny mpanjifa mba hanamboarana ny rafitra mety indrindra 1, dingana mpamily + dingana maotera Stepper rafitra no be mpampiasa indrindra rafitra mitondra fiara eo an-tsena amin'izao fotoana izao, ny ny malaza indrindra dia telo-pha...
SY- Laser Cutting Machine - Inona no azo noforonina?
Ny fampiasana ny CO2 tamin'ny laser fanapahana milina dia tena malalaka, ka afaka mamorona malalaka. SY tamin'ny laser fanapahana milina dia afaka mahafeno isan-karazany ny filan'ny mpanamboatra, mpankafy sy ny mpandraharaha mpandraharaha, anisan'izany ny milina tsotra famolavolana hevitra, fonosana fitaovana sy MEDALS sy amboara, satria ...
Inona ny milina fibre optique lafo vidy indrindra?
Shandong Shenya CNC Equipment Co., LTD., ny milina fanapahana tamin'ny laser fibre avo lenta vidiny ambany (1) High precision, hafainganam-pandeha haingana, slit tery, faritra voakasiky ny hafanana ambany indrindra, tsy misy burr. (2) tamin'ny laser fanapahana lohany dia tsy hifandray amin'ny ambonin'ny fitaovana, tsy scratch ...
Ity ve ilay mpanapaka laser notadiavinao? Vidin'ny mpanjifa imbetsaka!!!
nataon'ny admin tamin'ny 21-10-14
Ny tena masontsivana .SY-LASER- X, Y miasa isan-karazany: 1300mm * 2500mm fanapahana fifantohana family: F=80mm tamin'ny laser ambony indrindra Output hery: 500W Ahitsio ny matetika ny manaraka totohondry: $300Hz Power pulse sakany: 0.5ms-2ms Laser: avo roa heny – Jiro volamena – voapetaka concentrating cavity Manapaka interface tsara fiara...
Inona no tsy fantatrao momba ny mpanapaka antsy vibration?
Deep CNC dia mifantoka amin'ny fikarohana, ary niala tamin'ny vibration antsy fanapahana milina, malefaka fanapahana ny sasany dingana vokatra, toy ny baoritra, plastika, hoditra sy ny sisa. Vibration cutter amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny fizotry ny fanapahana akora malefaka miaraka amin'ny fitaovana fanodinana, be mpampiasa ary hi ...
mpiara-miasa azo itokisana-Mpanamboatra avy any Jinan, faritanin'i Shandong
Shandong Shenya CNC Equipment Co., Ltd. dia mpanamboatra fitaovana matihanina azonao itokisana, ary ho mpiara-miasa azo antoka aminao. Vokatra lehibe: l milina sokitra cnc l milina sokitra hazo l milina fanapahana fibre optika l milina marika fibre optique l milina sokitra laser ...
123456 Manaraka > >> Pejy 1/6